‘Te hiaina izahay’: an-tapitrisany ireo Siriana ampijalian’ny hanoanana sy ny hetaheta ao Yarmouk natao fahirano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2019 19:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Ελληνικά, Deutsch, 日本語, বাংলা, Português, English
Miray hina amin'i Yarmouk i Kafranbel. Misoratra eo amin'ilay sorabaventy ny hoe: “Vokim-boninahitra ny kibo aty Yarmouk ry faikam-boto ah.” Loharano: pejy Facebookn”ny hetsipanentanana “We Want to Live”
Navoaka voalohany tao amin'ny SyriaUntold ity lahatsoratra ity.
Miaraka amin'ny fiharatsian'ny loza Siriana isan'andro, mifantoka kokoa amin'ireo fifandonana jeopôlitika sy ara-tafika ny sain'izao tontolo izao. Tsy misy miraharaha ireo olana hafa na dia mavesa-danja aza. Azo tanisaina ny olan'ny fanaovana fahirano ny toby Palestiniana ao Yarmouk izay efa naharitra herintaona mahery izay. Ny hetaheta no vokatra farany tamin'ny fanaovana fahirano an'i Yarmouk, izay mampijaly ireo mponina efa herinandro maromaro izay. We Want to Live: Thirst Under Siege (Te Hiaina Izahay: Hetaheta Ambany Fahirano), izany no anarana nomena ny hetsipanentanana malaza iray izay natao mba hisarihana ny saina amin'ity olana lehibe ity.
Nampiantrano Palestiniana sy Siriana 160.000 ilay tobin'i Yarmouk, izay napetraka ao Damas, renivohitra Siriana. Ankehitriny, mpitsoaponenana 18.000 sisa no hany mipetraka ao amin'ilay toby niharan'ny fahirano.
Natomboky ny tanora Siriana sy Siro-Palestiniana avy tao anaty sy ivelan'ilay toby ilay hetsipanentanana. Hisarika ny saina amin'ireo famaizana ataon'ny fitondrana amin'i Yarmouk ny tanjon'izany. ‘Voatery ho fatin'ny hanoanana, hetaheta sy aretina ny mponina ao aminy”, hoy ny iray amin'ireo mpikarakara ilay hetsipanentanana tamin'ny Syria Untold. ‘Efa hatry ny ela no nanaovana fahirano azy, saingy niharatsy ny toedraharaha hatramin'ny nanapahan'ny fitondrana ny famatsian-drano.”
Efa hatramin'ny 17 desambra 2012 i Yarmouk no natao fahirano amin'ny ampahany, ary natao fahirano tanteraka kosa nanomboka ny 17 Jolay 2013. Olona 170 eo fara-fahakeliny no matin'ny hanoanana, ary mihoatra ny 20.000 ireo mbola miaritra ilay fanaovana fahirano. Tsy maintsy niaritra fanafihana miverimberina, fanafihana an'habakabaka ary famafazana baomba mahery vaika taminà tranobem-bahoaka, fianarana, hôpitaly sy moske ihany koa ilay tanàna.
Mba hiatrehana ireo fahatapahan'ny rano, tsy maintsy mandeha mantsaka rano any amin'ny lavadrano ny ankamaroan'ireo mponina ary mamakivaky ny toby iray manontolo mba hitondràna izany any an-tranony. Tsy fisotro ilay rano ary marary izay misotro izany.
Iray amin'ireo fanehoana ny hetsipanentanana'We Want to Live’. Loharano: pejy Facebook-n'ilay hetsipanentanana
Maneho fahaiza-mamorona lehibe mifantoka amin'i Yarmouk ilay hetsipanentanana We Want to Live (Te Hiaina Izahay), bokikely sy petadrindrina maneho ny lozan'ny hanoanana sy ny hetaheta, ary koa tantara an-dapihazo lalaovina ao amin'ilay toby. Mba hiteraka firaisankina amin'ny mponina iharan'ny fahirano, mampiasa ny Aterineto hizaràna sary sy hafatra avy ao Yarmouk sy mba hitarihana ny rehetra hizara sy hanaparitaka ilay hetsipanentanana ireo mpikatroka mafana fo. An-jatony maro ireo mpampiasa aterineto naka sary ny tenany ho firaisan-kina amin'ilay toby ary nizara ireo sariny tao amin'ny Facebook sy Twitter, ambanin'ireo tenifototra #LetUsBe sy #thirst_under_siege.
Iray amin'ireo petadrindrina lanjain'ireo mponina ao Yarmouk ny “Tsy mitaky afa-tsy izay mendrika anay izahay: miaina anaty voninahitra”. Naneho hevitra tamin'ny alalan'ny fizaràna ity hafatra manaraka ity ny tananàn'i Kafranbel, fantatra amin'ireo teny filamatra feno hatsikana ataony:
Vokim-boninahitra ny kibo aty Yarmouk ry faikam-boto ah.